Umenzi weevenkile ezithengisayo kunye nelogo | Ukudibanisa
Ukungena kwi-debarker esetyenziselwa ukucoca ulusu lwelog kunye nokwenza ilogo eluhlaza ukuba ijikeleze, emva kokumakisha kuya kuba lula ukuba i-peeling lathes idibanise kwaye ubukhulu be-veneer buya kuba ngaphandle kokuhluka okukhulu, kwakhona kunokunyusa i-lathes ubomi.
I-roller eyodwa kunye ne-rollers ezimbini zi-mace type ezenza kube lula ukubamba iinkuni kunye nokuphakamisa ukusebenza ngokufanelekileyo. Lo matshini wamkela umgaqo wokusika ojikelezayo we-non-chuck rotary lathe, uxinzelelo lwe-hydraulic drive kulwakhiwo, unokukhawuleza ukususa i-bark ngokukhawuleza nangokufanelekileyo ugqibezele umsebenzi ojikelezayo.
1.modeli etyumza ezinokuyityumza inkunkuma ebhalwe ukuhanjiswa ngokulula kunye nokusetyenziswa.
2.imodeli eqhelekileyo ngaphandle kokutyunyuzwa
Umzi mveliso wethu unikezela ngenkonzo ye-OEM, sinokubonelela ngomatshini ngokweemfuno zakho.
Sithengisiwe kakhulu kumatshini wokudibanisa kunye nokuchola umatshini kunye noomatshini abanxulumene noko ekwenziweni kwe-veneer. Kwaye kule minyaka yophuhliso, sinearhente embalwa kumazwe ahlukeneyo enza ulwabiwo kunye nokuthengisa kunye nomsebenzi wentengiso epheleleyo. Kwaye le nkqubo yearhente ikwasinceda ukuba sifumane igama elingcono emva kwenkonzo yokuthengisa. Ngenxa yokuba iiarhente zethu ziyakwazi ukuya kwindawo yabathengi kwaye zisombulule iingxaki kwaye zinika iingcebiso.
Nakumazwe angenayo iarhente, awudingi ukuba nexhala malunga nenkonzo. Ngenxa yokuba sineqela lethu leenkonzo ezikwi-Intanethi elinokunceda abathengi basombulule ingxaki ngokufowuna ividiyo.
1. Emva kokuba ixolo lexolo lingakhusela ukuxobuka imela kwisinyathelo se-peeling, ukuphucula ibakala le-veneer
2.Usebenzisa umgaqo wokusika ojikelezayo we-non-chuck rotary lathe
Uxinzelelo lwe-hydraulic drive kulwakhiwo, lunokususa ngokukhawuleza nangokuphumelelayo ixolo kunye nokugqiba umsebenzi wokujikeleza
Umatshini omnye we-debarker unokubonelela ngeendlela ezimbini zokujikeleza, gcina malunga nabantu abahlanu okanye abathandathu
Ukondla 5.Hydraulic, uyakwazi debarking kunye roundup ezincinane ubungakanani log eluhlaza
Ixabiso elikhuphisanayo kunye nomgangatho
Egqithileyo isixhobo sokusila imela
Okulandelayo: umgca wemveliso ngamaplanga